Nepal : Ampiasaina Ny Vakan-Janabolana Hanarahan-dia Ilay Leopardan-dranomandry Antsoina Hoe Omi Khangri · Global Voices teny Malagasy
Nepal : Ampiasaina Ny Vakan-Janabolana Hanarahan-dia Ilay Leopardan-dranomandry Antsoina Hoe Omi Khangri
Voadika ny 26 Jona 2015 4:24 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, bahasa Indonesia, Español, Deutsch, 日本語, Italiano, English
Zanakà leopardan-dranomandry any amin'ny Central Park Zoo any New York. Sary avy amin'i Linda Asparro. Fizakàmanana Demotix (10/11/2013)
Any ambony any Himalaya no ahitana ny karazany iray amin'ireo saka tsara indrindra sy tsy azo samborina maneran-tany – ny leopardan-dranomandry. 3.500 -7.000 sisa biby miriorio tavela any Azia Afovoany sy Atsimo noho ny fihazàna azy antsokosoko hakàna ny volony sy ny taolany ary isan'ny biby “tandindonin-doza” ao amin'ny lisitra menan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny tahirin-javaboahary ahitàna ireo karazana ahiana ho lany taranaka.
Tsy elaakory izay, nametrahan'ny departemanta miandraikitra ny valan-javaboaharim-pirenena ao amin'ny governemanta Nepale, miaraka amin'ny fanohanan'ny National Trust for Nature Conservation sy ny WWF any Nepal vakana mandefa onja eny amin'ny zanabolana ny leopardan-dranomandry iray mba hanaraha-maso ny fivezivezen'ny leopardan-dranomandry sy hahafantarana ny fihetsiny, ny fahazàrany amin'ny fivezivezeny ary ny fonenany any Nepal. Omi Khangri, ilay leopardan-dranomandry 5 taona, nomena anarana avy amini'ilay tendrombohitra any Olangchung Gola any amin'ny faritr'i Kanchenjunga, no leopardan-dranomandry faharoa nametrahana ilay fitaovana mandefa onja.
Leopardan-dranomandry iray tsy fahita firy no noravahana vakana miaraka amin'ny teknolojia GPS-n'ny zanabolana any Nepal.
Mino ireo mpiaro ny tahirin-javaboahary fa manan-danja amin'ny fiarovana ireo biby 350-500 izay miriaria any Himalaya any Nepal ireo torohay voaangona avy amin'ilay vakana ireo.
Asa mafy any amin'ny toerana sarotra
Sarotra ny fahitana leopardan-dranomandry amin'ny tany feno karao-bato, mikintaontaona ary tsy misy zava-maniry, manginy fotsiny ny volony matevina, fotsy hatsatra mipentina volon-davenona matroka manopy mainty izay manampy ny fiafenan'ilay saka any amin'ny tehezan-tendrombohitra feno haram-bato. Herintaona sy tapany teo no lanin'ireo manampahaizana mba hametrahana vakana tamin'ilay biby faharoa.
Tsy maintsy niandry 20 andro mahery ireo mpiasa, ary tsy maintsy nanova ny fomba famandrihana ho fikarohana , fisamborana, ary fametrahana ilay vakan-janabolana amin'i Omi Khangri.
Inty ny lahatsary mampiseho ny fametrahana ny vakana amin'ilay leopardan-dranomandry.
Faritra mahavariana sy mahafinaritra sady misy an'i Kanchengunga, tendrombohitra fahatelo avo indrindra maneran-tany, saingy malaza ratsy ihany koa noho ilay angidimby nianjera tamin'ny 2006 ilay faritra misy ny leopardan-dranomandry mitondra onja. Olona 24, isan'izany ireo mpiaro ny valan-javaboahary malaza no maty tany Ghunsa Kanchenjunga, tamin’ ny fianjeran'ilay angidimby rehefa niverina avy nanolotra ny fitantanana ny valan-javaboaharin'i Kanchenjunga tamin'ireo vondrom-piarahamonina any an-toerana- fotoana iray ilaina tsarovana ao anatin'ny tantaran'ilay valan-javaboahary.
Tsy zava-baovao ny vakana mandefa onjan'i Omi Khangri – efa noravahana vakana mandefa onja ireo tigra, lalomena ary ny voay ‘gavial’ any Nepal mba hikarohana momba ny fivezivezeny.
Tandindonin-doza ny leopardan-dranomandry noho ny famonoan'ireo mpiandry andiam-biby azy ireo ho fiarovana ny biby fiompy andrasany, araka ny tatitry ny Saving Snow Leopards (Vonjeo ireo Leopardan-dranomandry).
Zava-dehibe ny fandaharam-panabeazana tantànan'ny vondrona toy ny Snow Leopard Trust sy ny Snow Leopard Conservancy hanakiviana ny mpiandry andiam-biby fiompy tsy hamono ny leopardan-dranomandry. Ny fanatsarana ny teknikam-piompiana sy ny fikarohana fomba mahomby kokoa amin'ny fiandrasana biby fiompy no fomba voalohany azo hisakanana ny famonoana.
Tantarain'i Anil Adhikari, mpiasa ao amin'ny valan-javaboahary any an-toerana sady mpandrindra ny tetikasa Snow Leopard Conservancy any Everest sy Annapurna faritr'i Nepal ao amin'ny bilaogy ny fanentanana hafa atao mba hiarovana ilay biby, toy ny hoe omena onitra ny mpiandry biby fiompy raha matin'ny leopardan-dranomandry ny bibiny :
Tsy tomponà biby fiompy ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona, fa vitsivitsy ihany no manao izany. Raha mahafaty zanakà Yak (karazana omby) ny leopardan-dranomandry iray dia mandray onitra 700 ropia ny tompony. 1.500 ropia kosa no omena ho an'ny lehibe.
Amin'ny fanadihadiana ny fivezivezein'i Omi Khangri, antenain'ireo mpitahiry azy ny hahita ezaka ho fiarovana tsaratsara kokoa mba hiarovana ireo leopardan-dranomandry izay hazaina noho ny volony sy ny taolany ary vonoina noho ny valifatin'ny mpiandry.